Amanqaku kaMark Tanner Martech Zone |
Amanqaku ngu UMark Tanner
Njengomququzeleli kunye ne-COO, uMark ulawula ukuthengisa kunye nokusebenza kweQwilr, kwaye uncedile ekwakheni indawo ekude kakhulu, ethengiswa kwihlabathi liphela. KuGoogle, wanceda ukwenza uninzi lwentsebenziswano yomshicileli ekhokelele kwiincwadi zikaGoogle zokudlala kunye neencwadi kwi-Android. Ubuyele e-Australia ngo-2013, waqala i-Qwilr nomseki-mbumbano uDylan Baskin ukubuyisela unxibelelwano lweshishini ngamaxwebhu.
Unxibelelwano lwabathengi luphawu lwalo lonke ishishini. Nangona kunjalo, nge-COVID-19 yokunyanzela ukunciphisa uhlahlo-lwabiwo mali lwe-65% yabathengisi, amaqela anikwe uxanduva lokwenza okungakumbi ngokuncinci. Oku kuthetha ukuba nakho ukuvelisa konke ukuthengisa kunye nentengiso yesibambiso kuhlahlo-lwabiwo mali olucuthiweyo, kwaye rhoqo ngaphandle kobunewunewu bomyili okanye iarhente yokuyivelisa. Ukusebenza kude kunye nokuthengisa kukwathetha ukuba ukuthengisa kunye neqela lokuthengisa alinakuphinda lithembele kubuchule bokunxibelelana nabantu ukuze bakhulise